Umkhiqizi Wamalambu Nabanikezeli Bokukhanyisa -I-Giga Lighting
Umklamo wokukhanyisa ochwepheshe kanye nomkhiqizi wesibani kusukela ngo-1995.
Ukukhangisa ngento ethile
I-LED Pendant & abanye
I-E27 / E14 / GU10 / G9
I-E27 / E14
I-LED eyakhelwe ngaphakathi
Abakhiqizi bakaLamp basebenza ngokukhiqiza ukulungiswa kokukhanyisa kanye namalambu wekhwalithi. Ukugxila ekukhanyiseni kwe-LED ukukhanyisa, ukukhiqizwa, kanye nesixazululo.
Izincwadi zethu zezincwadi zihlanganisa izibani zokuhlobisa nokukhanyiswa kwezentengiso.
I-Giga Lighting Classic Interior Interior Design 0465
Uphahla lwe-LED& I-LED Pendant 0465 SeriesIsitayela: Isibani sanamuhla, isibani sesimanje, isibani sokuhlobisa ikhayaOkubonakalayo: i-iron + acrylicUsayizi: Dia. I-400mm / 600mm / 800mmU-Lumen: 80-85LM / W, SMAbleUmbala: Isihlabathi esimhlophe / esinesihlabathi esimnyama / segolideUmthombo Okhanyayo: I-LED 2835Isitifiketi: CE / CB / Vde / Tuv / UL / ETL / ETL / SAA
I-Giga Lighting Classic Interior Interior Design 0512
Isithwangi esikhuluUchungechunge Cha.: 0512Isitayela: Isibani se-PostmodernismIzinto ezibonakalayo: insimbi engagqwali& A acrylicUsayizi: Dia. I-550mm / 800mmQeda: ukupendaUmthombo Okhanyayo: I-LED 3030Isitifiketi: CE / CB / Vde / Tuv / UL / ETL / ETL / SAA
I-Giga Lighting Classic Interior Design 20210
Egiglighting in No. 36, zhongshan eminyaka emibili, iShiqi, Zhongshan, Guangdong, China (Ikhodi Yeposi: 528400) Imikhiqizo eyinhloko 20210.Ngesipiliyoni sokukhiqiza esicebile, ngaso sonke isikhathi ufunda ubuchwepheshe obuthuthuke kwabezinye izizwe futhi wethula imishini eyinkimbinkimbi. Ngaphandle kwalokho, sinohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ephezulu ukuze lwenze ukuhlolwa kwekhwalithi okuqinile. Konke lokhu kunikeza izimo ezinhle zokukhiqiza ikhwalithi ephezulu.
Isibani esisohlwini lwe-LED, i-LED PendantOkubonakalayo: i-aluminium + iron + acrylicUsayizi: Dia. I-420mm / 600mm / 800mmLumen: 4300lm, 5270lm, 8600lmUmbala: Isihlabathi esimhlophe / esinesihlabathi esimnyama / segolideUmthombo Okhanyayo: I-LED 2835Isitifiketi: CE / CB / Vde / Tuv / UL / ETL / ETL / SAA
Izinsizakalo ze-OEM / ODM
I-Giga Lighting ngumkhiqizi wesibani oqeqeshiwe kanye nomlingani onamandla wokuhweba wezinto eziholwa yi-LED namaphrojekthi. Ngaphezulu kweminyaka engama-25-yesipiliyoni kuma-Proving Lighting imikhiqizo ezimakethe zaseYurophu, akungabazeki ukuthi siyakholelwa ukuthi sinesineke, sinokwethenjelwa, sinesibopho futhi sinothando. Siyazi, ngokubekezela okwengeziwe nangokuthe xaxa, sizoba namathuba amaningi okunikeza izixazululo ezingcono kumakhasimende ethu. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi siphikelela 'ekuhlolweni okuhle, okuqondiswe kubantu, ukwethembana nokuwina - ukunqoba emoyeni wokutadisha nokufunda. "
1. Idizayini yethu: Ngaphandle kobuhle bethu ebhizinisini le-ODM, futhi sinikeza insizakalo yokuncintisana ye-OEM
2. Onolwazi: Ngaphezu kweminyaka engama-25 yabakhiqizi bekhaya bomhlobiso basekhaya, umlingani wakho othembekile.
3. OEM / ODM: Sesivele sithumela amakhulu emikhiqizo yethu kumakhasimende emazweni ahlukene njalo ngonyaka
Wasungula ubudlelwane obuqinile nemakethe ejwayelekile
Abakhiqizi besibani base China abakhiqizi be-Giga
]Ikhwalithi ephezulu yekhwalithi evamile ngokuklama nokukhiqizwa.
I-Giga Lighting ingumkhiqizi wokukhanyisa ochwepheshe nowokude nokuthumela ngaphandle. Ixhaswe iminyaka engaphezu kwengu-25 yamalambu ekhiqizwa ukuthumela ngaphandle, besilokhu sikhonza amakhasimende eYurophu, eNyakatho Melika naseNingizimu Melika ngokuqinile.
Kusukela kusuka kuma-spotlets elula, ukukhanyisa kwe-Giga kube nokunaka izidingo zamakhasimende aseYurophu nakwaseMelika. Siqale kusuka ekubonisweni kwesampula okwenziwe ngamakhasimende futhi sanqwabelana kancane ngesipiliyoni ekwakhiweni kokukhiqiza. Ngokuqonda kwethu ukwakheka komkhiqizo nobuhle bokukhanya nesithunzi, sikhule kancane kancane ukwakheka kwethu komkhiqizo.
Namuhla, ukukhanyiswa kwe-Giga kunezisekelo ezimbili zokukhiqiza eZhongshan City, eGuangdong eSifundazweni, eChina, nemikhiqizo engaphezu kwe-1000. Sinemikhiqizo ehlukahlukene. Ngokusekelwe kwisitayela sanamuhla, imikhiqizo isemboza ngaphakathi endlini yangaphandle, ukuhlobisa kokuthengisa.
Ukukhanya kwe-Giga kungene emkhakheni we-LED isikhathi eside. Kusukela ngo-2013, sithuthukise nohlelo lomkhiqizo lwe-LED. Isabelo semikhiqizo ye-LED sekhule ngokushesha. Inhlanganisela ye-LED ne-Driver, ukulawulwa kwekhwalithi yezakhi zikagesi kanye nohlelo lokusebenza oluvuthiwe lwe-Flow Effect Induduzo ukuncintisana okuyisisekelo kokukhanya kwe-Giga.
Eminyakeni engama-25 edlule, ukukhanya kwe-giga kuthathile "Vumela abantu bajabulele ubuhle, induduzo kanye nemfudumalo yavela ekukhanyeni nasesithunzini" njengombono wayo, futhi kuzibophezele ekufundeni kahle kwezemfashini, kepha kuyamangaza ngohlelo oluphelele lwekhwalithi futhi lungabizi amanani.
Ngo-2021, "i-Kyocera Filosophy" ifakwe kuwo wonke asebenza naye ngenhliziyo.
Ukwaneliseka okwengeziwe Kumakhasimende ethu ngekhwalithi engcono nasenkonzweni kuzohlala kuleluleki sethu naphakade!